Kulan lagu wadey inay yeeshaan Baarlamaanka Soomaaliya oo baaqday. – Radio Daljir
Nofeembar 10, 2012 3:40 b 0
Muqdisho Nov 10, Kulan uu maanta yeelan lahaa golaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dib u dhac ku yimid kadib markii Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada ku wargeliyey inuu baaqday kulankaasi.
Kulankan maanta oo codka Kalsoonida loogu qaadi lahaa Wasiirada Cusub ee dhowaan uu soo magacaabay ?Dr Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa baaqday kadib markii Wasiirada Cusub loo diray mid walba inuu soo gudbiyo qorshihiisa shaqob ee 4,ta sano ee soo socota.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Prof Maxamed Cismaan Jawaari ayaa sheegay in Golaha Wasiirada laga rabo soo gudbinta qorshahooda shaqo mudada xil haynta kadib markay soo gudbiyaaana Baarlamaanku codka Kalsooni siinta u qaadi doonaan.
Baaqashada kulanka uu Baarlamaanku yeelan lahaa maanta ayaa dhinaca loo saarayaa xildhibaanada Baarlamaanka oo intooda badani aysan ku qanacsanayn Xukuumada Cusub ee Soomaaliya oo dhowaan uu soo magacaabay Ra’isal Wasaare Saaacid, Waxaana wararku intaa ku dirayaan in kulanku u baaqday cabsi laga qabo diidmo Baarlamaanku ka muujiyo Xukuumadda.
Madaxwaynaha Ximin iyo Xeeb Maxamed Aadan Tiicay oo Beeniyay in maamulkiisu uu la shaqeeyo kooxaha Burcad-badeedda.